Kuthiwa ubengazi nanyaka umfundi odlwengulwe omunye ebhasini | News24
Kuthiwa ubengazi nanyaka umfundi odlwengulwe omunye ebhasini
Durban - Kusabatshazwa ihlazo lomfundi waseQalakahle High School eBhamshela, enyakatho yeTheku osolwa ngokudlwengula uzakwabo kade kuhanjwe nesikole ngomhlaka-20 Okthoba, kuyiwe eThekwini kuyongcebelekwa.
Kubikwa ukuthi lesi sigameko senzeke ebhasini abafundi abebehamba ngalo, sekubuywa eThekwini.
Kuthiwa lo mkhuba uwugile phakathi ebhasini kukhona nabanye abafundi bebukela.
Umthombo weLANGA ulihlebele ukuthi lo mfundi odlwenguliwe ubengazi nanyaka njengoba kusolwa ukuthi kukhona abefakelwe khona esiphuzweni sakhe.
Kuthiwa esebanjiwe umsolwa, ushaye uthisha obezama ukumkhuza ngesikhathi egila lo mkhuba.
"Lezi zingane bezihambe nesikole ziye eThekwini, kubikwa ukuthi umsolwa uqale watshela umshayeli webhasi ukuba acishe amalambu. Umshayeli ukwenzile lokho, kuthe sekucishiwe wabe esedlwengula lo zakwabo.
"Nakhona ukuze abanjwe, kusize omunye umfundi obonile watshela umshayeli, kwaziswa nothisha abebekhona ebhasini. Umshayeli ukhanyise amalambu wabanjwa umsolwa," kusho umthombo.
Uthi umfundi odlwenguliwe uphuthunyiswe esibhedlela esesimweni esibucayi. Zimkhalele umsolwa ngoLwesihlanu olwedlule.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCaptain Nqobile Gwala, usiqinisekisile lesi sigameko wathi amaphoyisa aseNsuze aphenya icala lokudlwengula kanti ukhona umsolwa oboshiwe.
Uthi umsolwa amaphoyisa amfice ekubo eChibini kanti kulindeleke ukuba avele eNkantolo yeMantshi yaKwaMaphumulo namuhla ngoMsombuluko.